अफिसमा हुनुहुन्छ तर तपाईंको घरमा भएको कम्प्युटरमा भएको फाइल चाहिएको छ ? क्लासमा भएका बेला तपाईंको घरको कम्प्युटरमा भएको फाइल आवश्यक परिरहेको छ ? एक ठाउँमा बसेर कुनै अर्को ठाउँमा रहेको कम्प्युटरलाई एक्सिस गर्न असम्भव छ भन्ने सोच राख्नुभएको छ भने तपाईं गलत हुनुहुन्छ, यसो गर्न असम्भव पक्कैपनि छैन । तपाईंले घरमा बसेर संसारको जुनै कुनामा रहेको कम्प्युटरसँग पनि सजिलै एक्सिस गर्न सक्नुहुन्छ । यसो गर्ने विभिन्न तरिकामध्ये हामी तपाईंलाई केही उपाय सिकाउन गइरहेका छौँ ।